khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal कांग्रेसमा विरासत थाम्ने कोइराला परिवारको चाहाना , कति संम्भव ? – khabarmuluk.com
कांग्रेसमा विरासत थाम्ने कोइराला परिवारको चाहाना , कति संम्भव ?
४७ वर्ष कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा अब विकल्प र बहस पनि कोइरालाकै हुुनुुपर्ने भन्दै कांग्रेस भित्र कोइराला परिवारको अबको विकल्प कोइराला नै हुनुपर्ने माग
नेपाली कांग्रेसलाई हुर्काउने मल जल गर्ने काम सबैभन्दा धेरै कोइराला परिवारले गरेको पक्का हो । पार्टीलाई २००७ साल अगाडिबाट लिड गरेको कोइरालाले परिवारले शुशिल कोइरालाबाट आएर शेर वहादुर देउवाको हातमा नेतृत्व पुग्यो ।
४७ वर्ष कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा अब विकल्प र बहस पनि कोइरालाकै हुुनुुपर्ने भन्दै कांग्रेस भित्र कोइराला परिवारको अबको विकल्प कोइराला नै हुनुपर्ने माग उठेको छ भने कोइरालाजन एकाअर्कोमा जुटेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक भेटघाट र कार्यकर्तालाई कोइराला सभापतिको जस्तो नयाँ पुुस्तामा हस्तान्तरणको हल्ला पनि कांग्रेस भित्र उठेको छ । कोइराला परिवारभित्रका शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला यो दौडमा छन् । १६ देखि १९ भदौसम्म महाधिवेशनको मिति पारित भएसँगै तीनै कोइरालाले सभापतिमा आ–आफ्नो दाबेदारीसहित छलफल सुरु गरिरहेका छन् ।
यस पटक आफ्नो परिवारको लिगेसी फर्काउने कसरतमा छन्, बीपीपुत्र शशांक कोइराला, नोना कोइरालापुत्र शेखर कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाता कोइराला । १३औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका शशांक त्यति खुलिसकेका छैनन् । विराटनगरमा रहेका शेखरले भने कार्यकर्ता भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यता सुजताले पनि भर्चुअल माध्यमबाट कार्यकर्तासँग संवाद गरिरहेकी छिन् ।
अधिकांश समय पार्टीको नेतृत्व हाँक्नेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृका कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला थिए । कांग्रेसको सभापतिका रूपमा सबैभन्दा बढी बीपी कोइरालाले २९ वर्ष नेतृत्व गरे । मातृका कोइरालाले १ वर्ष, गिरिजाप्रसाद कोइराला १२ वर्ष र सुशील कोइरालाले ५ वर्ष सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका इतिहास छ।
उनीहरू दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने सवालमा भने एकमत छन् । सँगै, कोइराला परिवारबाट कसलाई नेतृत्वमा उठाउने भन्ने विषयमा समझदारी बनाउन आन्तरिक छलफलमै छन् । ’कोइराला परिवारबाट यस पटक सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत हुन्छ । हामीबीच सरसल्लाह भइरहेको छ,’ नेतृ सुजाता कोइरालाले भनिन् । १३औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा शशांकलाई सघाएकाले यस पटक उनले आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने दाबी शेखर कोइरालाको छ । कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वको दाबेदारी नछोड्न सुझाव दिएको उनी बताउँछन् ।
कार्यकर्तामाझ शशांकको तुलनामा शेखर लोकप्रिय नै मानिन्छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा उनको नाम अग्रस्थानमा थियो ।यता सुजाता कोइराला कांग्रेसले यस पटक सभापतिमा महिलालाई अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिन माग गरिरहेकी छन् । कोइराला खानदानकै बीच कुरा उठेपनि उता गणेशमान सिंह पुुत्र प्रकाश मान सिंह पनि आफ्ना योजनामा लागि रहेका छन् । निधि देउवा, पौडेलको नेतृत्वको पनि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।